Umphezulu weflethi we-HONGSBELT ohambisa ibhanti lokuhambisa ugwebu Nokuba ufuna ukuthoba iimfuno zogcino kwisihambisi sebhanti yogwebu, unciphise umonakalo wemveliso ecaleni kokuhambisa ugwebu, wandise ubomi bebhanti kwisicinezeli, okanye usombulule...
Izixhobo zokusila zelaphu zibonakalisa iimeko zokusingqongileyo ezifuna kakhulu, zihlala zibandakanya amaqondo obushushu aphezulu kunye nokwahluka okukhulu kokufuma. Iinjineli zethu zesicelo, amagcisa, kunye neengcaphephe zokwenziwa zizisa iingcebiso ezilungiselelwe ubuchwephesha, inkonzo esemgangathweni yabathengi, kunye...
Itekhnoloji yenjineli yeBhanti yaseHong ekhokela izisombululo ezizenzekelayo. Iimveliso zethu zenzelwe ukuthutha iimveliso zakho ukusuka kumgca ukuya kumgca kwiinkqubo zendibano ezizenzekelayo kunye nezandla.I-Hong's Belt conveyors yenzelwe ukuhambisa imveliso kwindawo echanekileyo, ngexesha elichanekileyo kunye...
Umthamo omkhulu wemveliso yeshishini leemoto kunye nemigangatho yomgangatho ophezulu ifuna inkqubo eqhubekayo yokuvelisa izinto ezintsha. Ngokubhantiswa kwamashishini kubandakanyeka kuyo yonke inkqubo yemveliso, iHabasit liqabane olifunayo kwiingcebiso zobuchwephesha kunye nezisombululo ezikumgangatho ophezulu ...
Ngeenkqubo zeHong's Belt kunye nobuchwepheshe obunelungelo elilodwa lomenzi, sinikezela ngezisombululo ezilungiselelwe abathengi bethu ukuba bafezekise iinjongo zabo kwaye banciphise iindleko. Iinguqulelo ezisemgangathweni zeHong's Belt zingqinwe ukuba zonyusa isimilo sabasebenzi, zivumela abavelisi ukuba bafikelele kwincopho yabo yemveliso...
Ibhanti yaseHong ibonelela ngoluhlu olubanzi lwezisombululo zokwandisa imisebenzi yakho yonke. Imveliso yethu inikezela ngemveliso kunye nokuthembeka kwenkqubo, kudityaniswe nokuphathwa ngobumnene kunye nokuguquguquka okuqhubekayo kokulawula ukupakishwa okutsha kwekamva. Ngemodyuli entsha...
Ukupakishwa kwesibini kufuna ukusetyenzwa okusebenzayo kunye nokusebenza kakuhle ukukhusela zombini imveliso kunye nokupakishwa kwayo okuphambili. Sinokukunceda ukhethe umthengisi ofanelekileyo kunye namabhanti okusebenza ukuze ufezekise ukuphuculwa kwenkqubo enkulu, imveliso ephezulu, kunye neendleko eziphantsi zokugcinwa. ...
I-Hong's Belt ibonelela ngemigca eyahlukeneyo yeendlela zokuhambisa ukupakisha ukulungiselela nayiphi na imveliso elinokuba nayo ishishini lakho. Izicelo zokupakisha ze-Hong's Belt zokuhambisa zibonelela ishishini lakho ngokukwazi ukwenza ngcono ii-asethi zabasebenzi ngelixa ufezekisa ngokuchanekileyo, ngokungaguquguqukiyo ...